Raggii kufsaday Caa'isha Ilyaas oo Bosaaso lagu toogtay - BBC News Somali
Raggii kufsaday Caa'isha Ilyaas oo Bosaaso lagu toogtay
11 Febraayo 2020
Qaar kamid ah ragga la toogtay
Waxaa saaka maamul goboleedka Puntland lagu toogtay laba kamid ah raggii kufsaday Caaisha Ilyaas oo maxkamadaha Puntland ay dil xukumeen.
Ragga la toogtay oo lagu kala magacaabo Cabdifitaax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed ayaa sakaa aroortii la geeyay fagaare ku yaala Magaalada Bosaaso ee Puntland, halkaas oo lagu qisaasay.
Ragga dilka lagu xukumaya oo titradoodu gaareysay saddex ayaa waxaa dib loo dhigay mid kamid ah raggaas, waxaana la filayaa in fahfaahin dheeraad ah ay ka bixiyaan hey'adaha garsoorka ee Puntland.
Raggan ayaa 25-kii bisii Febraayo ee sanadkii hore ee 2019-ka Magaalada Galkacyo ku kufsdaay Caaisha Ilyaas oo xilligaas jirtay 12 sano jir, waxaana arrintaas ay hadal heyn badan ka abuurtay guud ahaan Soomaaliya.
Caaisha oo markii la kufsdaay kadib la dilay ayaa meydkeeda laga helay afaaka hore ee gurigooda, waxaana falkaas uu dhaliyay caro aad u ballaaran.
Xigashada Sawirka, RADIO BANAADIR
Caa'isha Ilyaas Aadan
Waa markii ugu horeysya gudaha Soomaaliya lagu dilo rag kufsi geystay, waxaana inta badan maamulada lagu eedeyn jiray in aysan tallaabo ka qaadin dadka eedeeyo inay kufsi kula kacaan dumarka.
Hey'adaha xuquuqda aadanaha ayaa in muddo ah dalbanayay in Caaisha ay hesho cadaalad, waxaana mas'uuliyiinta Puntland ay horay u ballanqaadeen in dadkii ka dambeeyya dilka Caaisha cadaaladda la marsiin doona.
TOOS Suudaan oo u yeertay safiirkeeda u fadhiya Addisababa kadib caro ka dhalatay fal ay Itoobiya sameysay
Abiy Axmed oo war hor leh ka soo saaray qaabkii lagu soo afjari lahaa colaadda Itoobiya
Mareykanka dad ka badan 40 qof oo tahriibayaal ah oo Meydadkooda laga dhex helay Gaari
Abiy Axmed oo war hor leh ka soo saaray colaadda Tigray